Netflix ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ အကောင်းဆုံးရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ (၄) ကား - For her Myanmar
ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ယောင်းယောင်းတို့ရေ … ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတွေကို အပတ်စဉ် ရွေးပေးနေကြဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ်မှာ နည်းနည်းအပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဘက်ကို ကူးကြရအောင် … Stella ကတော့လေ ရုပ်ရှင်ကိုတစ်ကားတည်း ကြည့်ရတာထက် အတွဲလိုက်ကြည့်ရတာ ပိုအားရတယ် သိလား … ဒီတော့ Netflix ကနေ Stella ကြည့်နေကြဖြစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေအကြောင်း ယောင်းတို့ကို အမြည်းလေးပြောပြေပေးမယ်နော် …
ဗြိတိန်ဘုရင်မ Elizabeth II ရဲ့အကြောင်းကို မင်းသမီးဘဝကနေ အင်္ဂလန်တစ်နိုင်ငံလုံးကို အုပ်စိုးရတဲ့ဘုရင်မဖြစ်လာတဲ့အထိ ဇာတ်လမ်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Queen Elizabeth ရဲ့ ဘဝအလှည့်အပြောင်းတွေ၊ ကြင်ယာတော် Philip နဲ့ ဆက်ဆံရေး၊ ညီမတော် Margret ရဲ့အချစ်ရေးပြဿနာတွေ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရေးရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံတွေကို “The Crown” မှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်လို့ အတော်လေးကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ နေထိုင်မှုဘဝပုံစံကို ထင်ဟပ်အောင် အနီးစပ်ဆုံးရိုက်ကူးထားတာကြောင့် Netflix ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ကုန်ကျစရိတ်အကြီးဆုံးပါပဲ။ လက်ရှိမှာ အပိုင်း (၂၀) အထိထွက်ရှိထားပြီး ကျန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ မျှော်နေရဆဲပါ။
“Jessica Jones” ကတော့ Netflix နဲ့ Marvel က ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ Marvel ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း စူပါဟီးရိုးဇာတ်လမ်းပါပဲ။ ထူးခြားတာကတော့ အဓိကဇာတ်ကောင်က Jessica Jones ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးစူပါဟီးရိုးဖြစ်နေတာပါ။ သူမတူတဲ့စွမ်းအားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်လိုပဲ ရှင်သန်ရပ်တည်ချင်တဲ့ Jessica က အသေးစားအမှုတွဲလေးတွေကို အခကြေးငွေယူပြီး ဖြေရှင်းပေးတဲ့ အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးသူပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ အမှုကိစ္စတွေက သူ(မ)နောက်က ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်လာတဲ့အခါမှာတော့ စူပါဟီးရိုးမလုပ်ချင်လည်း လုပ်ရပါတော့တယ်။ Season2အထိထွက်ရှိထားပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Marvel က Netflix နဲ့စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး Season3မှာပဲ ဇာတ်သိမ်းတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Netflix ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်တဲ့ “Stranger Things” ကတော့ အခြားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေ လုံးဝကွဲထွက်နေတာပါ။ သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကိုတော့ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ အခြေတည်ထားပြီး မြို့ငယ်လေးတစ်ခုက နယ်ခံဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက် ရုတ်တရက်ဆိုသလို ထုးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားတာကနေ စပါတယ်။ ဒီပျောက်ဆုံးမှုကို ကောင်လေးရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဝိုင်းစုံစမ်းတဲ့အခါမှာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ဓာတ်ခွဲခန်းတွေ၊ တခြားကမ္ဘာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေ၊ ဆန်းကြယ်တဲ့သတ္တဝါတွေအကြောင်း တစ်စတစ်စသိလာရတဲ့အခါ … သာမန်ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေး လေးယောက်နဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ စမ်းသပ်ခံကလေးမလေးက ဒါတွေအကုန်လုံးကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာ ရင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်ရမှာပါ။ Sci-fi horror ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး အပိုင်း (၁၇) ပိုင်းထွက်ရှိထားပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ မကြာမီလာမည် မျှော်ပေါ့နော်။
ဟိုတုန်းကထွက်ရှိထားတဲ့ Sabrina the Teenage Witch ကို Netflix ကအသွင်တစ်မျိုးနဲ့ ပြန်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ အရင်ကားထက် နည်းနည်းပိုထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်လို့ Stella ကတော့ မြင်ပါတယ်။ သူ(မ) မိသားစုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကို အပြတ်ရှင်းမယ့် ဆယ်ကျော်သက်စုန်းမလေး Sabrina ရဲ့ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံတွေနဲ့အတူ စုန်းအတတ်တွေကိုကြည့်ပြီး ယောင်းတို့စိတ်လှုပ်ရှားနေမှာ သေချာပါတယ်။
ကဲ … ဒါကတော့ လက်ရှိ Netflix ကနေပြသနေတဲ့ထဲက Stella ကြည့်နေကျ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပါ။ ယောင်းတို့ရော Netflix က ဘယ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ကြည့်ဖြစ်ကြလဲ ?
အခနျးဆကျတှကေို စောငျ့မြှျောရလေ ပိုရငျခုနျဖို့ကောငျးလေ
ရုပျရှငျခဈြပရိသတျယောငျးယောငျးတို့ရေ … ရုပျရှငျကားကောငျးလေးတှကေို အပတျစဉျ ရှေးပေးနကွေဆိုတော့ ဒီတဈပတျမှာ နညျးနညျးအပွောငျးအလဲလေးဖွဈအောငျ ဇာတျလမျးတှဲတှဘေကျကို ကူးကွရအောငျ … Stella ကတော့လေ ရုပျရှငျကိုတဈကားတညျး ကွညျ့ရတာထကျ အတှဲလိုကျကွညျ့ရတာ ပိုအားရတယျ သိလား … ဒီတော့ Netflix ကနေ Stella ကွညျ့နကွေဖွဈတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲလေးတှအေကွောငျး ယောငျးတို့ကို အမွညျးလေးပွောပွပေေးမယျနျော …
ဗွိတိနျဘုရငျမ Elizabeth II ရဲ့အကွောငျးကို မငျးသမီးဘဝကနေ အင်ျဂလနျတဈနိုငျငံလုံးကို အုပျစိုးရတဲ့ဘုရငျမဖွဈလာတဲ့အထိ ဇာတျလမျးဆငျထားပါတယျ။ ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာ Queen Elizabeth ရဲ့ ဘဝအလှညျ့အပွောငျးတှေ၊ ကွငျယာတျော Philip နဲ့ ဆကျဆံရေး၊ ညီမတျော Margret ရဲ့အခဈြရေးပွဿနာတှေ၊ အင်ျဂလနျနိုငျငံရေးရဲ့ အရှုပျတျောပုံတှကေို “The Crown” မှာကွညျ့ရှုရမှာဖွဈလို့ အတျောလေးကို စိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ။ တျောဝငျမိသားစုရဲ့ နထေိုငျမှုဘဝပုံစံကို ထငျဟပျအောငျ အနီးစပျဆုံးရိုကျကူးထားတာကွောငျ့ Netflix ရဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှထေဲမှာ ကုနျကစြရိတျအကွီးဆုံးပါပဲ။ လကျရှိမှာ အပိုငျး (၂၀) အထိထှကျရှိထားပွီး ကနျြရှိနတေဲ့အပိုငျးတှကေိုတော့ မြှျောနရေဆဲပါ။
“Jessica Jones” ကတော့ Netflix နဲ့ Marvel က ပူးပေါငျးတငျဆကျထားတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲပါ။ ဇာတျလမျးကတော့ Marvel ရဲ့ထုံးစံအတိုငျး စူပါဟီးရိုးဇာတျလမျးပါပဲ။ ထူးခွားတာကတော့ အဓိကဇာတျကောငျက Jessica Jones ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးစူပါဟီးရိုးဖွဈနတောပါ။ သူမတူတဲ့စှမျးအားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပမေဲ့ သာမနျလူတဈယောကျလိုပဲ ရှငျသနျရပျတညျခငျြတဲ့ Jessica က အသေးစားအမှုတှဲလေးတှကေို အခကွေးငှယေူပွီး ဖွရှေငျးပေးတဲ့ အလုပျနဲ့ အသကျမှေးသူပါ။ ဒါပမေဲ့လညျး သဘာဝလှနျဖွဈရပျတှနေဲ့ အမှုကိစ်စတှကေ သူ(မ)နောကျက ထပျကွပျမကှာလိုကျလာတဲ့အခါမှာတော့ စူပါဟီးရိုးမလုပျခငျြလညျး လုပျရပါတော့တယျ။ Season2အထိထှကျရှိထားပမေဲ့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ Marvel က Netflix နဲ့စာခြုပျကို ဖကျြသိမျးပွီး Season3မှာပဲ ဇာတျသိမျးတော့မယျလို့ သိရပါတယျ။
Netflix ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးစှဲဖွဈတဲ့ “Stranger Things” ကတော့ အခွားဇာတျလမျးတှဲတှကေနေ လုံးဝကှဲထှကျနတောပါ။ သူ့ရဲ့ဇာတျလမျးကြောရိုးကိုတော့ ၁၉၈၀ ခုနှဈဝနျးကငျြလောကျမှာ အခွတေညျထားပွီး မွို့ငယျလေးတဈခုက နယျခံဆယျကြျောသကျကောငျလေးတဈယောကျ ရုတျတရကျဆိုသလို ထုးဆနျးစှာပြောကျဆုံးသှားတာကနေ စပါတယျ။ ဒီပြောကျဆုံးမှုကို ကောငျလေးရဲ့ မိသားစုတှနေဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ဝိုငျးစုံစမျးတဲ့အခါမှာ အစိုးရအဖှဲ့အစညျးရဲ့ လြှို့ဝှကျဓာတျခှဲခနျးတှေ၊ တစခွားကမ်ဘာတှနေဲ့ ဆကျသှယျမှုတှေ၊ ဆနျးကွယျတဲ့သတ်တဝါတှအေကွောငျး တဈစတဈစသိလာရတဲ့အခါ … သာမနျဆယျကြျောသကျကောငျလေး လေးယောကျနဲ့ ဓာတျခှဲခနျးကထှကျပွေးတိမျးရှောငျလာတဲ့ စမျးသပျခံကလေးမလေးက ဒါတှအေကုနျလုံးကို ဘယျလိုရငျဆိုငျမလဲဆိုတာ ရငျတထိတျထိတျကွညျ့ရမှာပါ။ Sci-fi horror ဇာတျလမျးတှဲဖွဈပွီး အပိုငျး (၁၇) ပိုငျးထှကျရှိထားပါတယျ။ ကနျြတာကတော့ မကွာမီလာမညျ မြှျောပေါ့နျော။
ဟိုတုနျးကထှကျရှိထားတဲ့ Sabrina the Teenage Witch ကို Netflix ကအသှငျတဈမြိုးနဲ့ ပွနျရိုကျကူးထားတာပါ။ အရငျကားထကျ နညျးနညျးပိုထိတျလနျ့စရာကောငျးတယျလို့ Stella ကတော့ မွငျပါတယျ။ သူ(မ) မိသားစုနဲ့လူသားမြိုးနှယျတှကေို ခွိမျးခွောကျလာတဲ့အရာမှနျသမြှကို အပွတျရှငျးမယျ့ ဆယျကြျောသကျစုနျးမလေး Sabrina ရဲ့ခပျမိုကျမိုကျပုံစံတှနေဲ့အတူ စုနျးအတတျတှကေိုကွညျ့ပွီး ယောငျးတို့စိတျလှုပျရှားနမှော သခြောပါတယျ။
ကဲ … ဒါကတော့ လကျရှိ Netflix ကနပွေသနတေဲ့ထဲက Stella ကွညျ့နကြေ ဇာတျလမျးတှဲတှပေါ။ ယောငျးတို့ရော Netflix က ဘယျဇာတျလမျးတှဲတှကေို ကွညျ့ဖွဈကွလဲ ?
Tags: Movie, Movie review, netflix, netflix and chill, series